Rag looga shakiyey Al Shabaab oo gaari lagala degay Dhuuso mareeb – XAMAR POST
Ciidamada Booliiska Dhuusamareeb ayaa xalay gaadiid ay la socdeen kala dagey rag dhalinyaro ah oo kayimid Magaalada Hargaysa kuwaa oo kusii jeeday Deegaanka Luuq-jeelow oo Gobolka Hiiraan ka irsan kana mid ah meelaha Alshabaab ay kataliyaan.
Taliyaha Ciidanka ilaaliya baraha koontaroolada ee Gobolka Galgaduud Dhamme Cabdi yare ayaa xaqiijiyey in raggaan oo lagu kala magacaabo, Jaabir xassan Diiriye iyo Yuusuf Cabdirisaaq ay Alshabaab kaga biireen Magaalada Hargaysa, isla markaana ay haatan tagi lahaayeen xero tababar oo kutaala Hiiraan, balse waxaa xogtooda goor hore helay Booliiska Galmudug oo gacanta kudhigey.
Sargaalka u hadley Booliiska ayaa xaqiijiyey in dhalinyaradaan oo qirtay in ay Alshabaab u socdeen ay xaqiijiyeen in ay qeyb kayihiin tiro dhalinyaro ah oo lagu shubey fikirka argagaxisada, si ay Somaliland kaga tegaan oo ay kaga barbar dagaalamaan Al Shabaab.
Ma jirto xog intaas ka baxsan oo laga helay raggaan lagu qabtay Dhuuso mareeb ee la sheegay in deegaan Al Shabaab ka arimiyaan kusii jeedeen.
Shir looga hadlayey Cimilada Soomaaliya Oo lagu Qabtay Muqdisho